Wakagadzirira Kugadzira Mari Kubva Kumba? - TMC App
Wakagadzirira Kugadzira Mari Kubva Kumba?
Iwe unogona kunge uri pakati pemamirioni avanhu vakashuvira kufungidzira maitiro ekuita mari kubva kumba. Zvingangodaro zvakaonekwa sechinangwa chisingasvikiki munguva yakapfuura; zvisinei kwete.
Iwe unogona kuwana dzakawanda nzira dzekuita mari kubva mukunyaradza kwemba yako nekuita tsvakiridzo painternet.
Kurota Uku Kunogona Kuitika Here?
Kune vanhu vazhinji vakave mamaneja avo vakapihwa kuti kuunzwa kweiyo info superhighway. Kune vanhu vazhinji vakaona zvichiita kuti vawane mari kubva kumba nekushandisa komputa yavo yakabatana neinternet. Iwe unogona kunge uri pakati peavo vanhu vari muhofisi uye vanowana mari kuita chimwe chinhu chaunofarira uye kutora kugutsikana kwakawanda muhupenyu.
Matanho ekutanga ekutsvaga maitirwo emari kubva kumba kuita basa rako remumba! Pane mikana yakawanda yaungashandiswa, asi iwe unozoda kuve wakashongedzwa nenzwisiso yekubvisa vanyengeri kubva kune chaivo vangangove vatengi. Nzira chete yaungaita izvi ndeyekutarisa, kutarisa, uye kuverenga zvimwe. Shanyira akawanda mawebhusaiti, tarisa ongororo uye shandisa yako yakanaka kutonga. Chinhu chipi nechipi chinoita sechakanyanya kunaka kuti chive chechokwadi chingangove icho chete. Iwe unogona kuzvichengetedza iwe nguva yakawanda uye mari nekuongorora maitiro ekuita mari kubva kumba zvakakwana. Izvi zvinongotora nguva yako uye zvinogona kukuchengetedza mazana emadhora munzira.
Iwe wakasarudza kuti uri kuzopa uchiedza kuwana mari kubva kumba pfuti. Zvino iwe unofanirwa kusarudza panowanikwa masimba ako nematarenda. Kubheja kwako kwakanyanya kushandisa kugona uye kugona kwauinazvo kana uchida zvechokwadi kupedzisira wava kushanda uye kuita mari kubva kumba. Iwe unogona kuwana mari kubva kumba nekugadzira uye kugadzira blog saiti mari, unogona kuseta online shopu kwaunogona kupa zvakakosha zvinhu kana zvakasiyana siyana zvezvigadzirwa. Iwe unogona kugadzira saiti inopa masevhisi ako kana uine nzvimbo yehunyanzvi; mikana haina muganho kana ukasarudza unoshuvira kuyedza uye kutanga basa kubva kumba.
Vanhu vazhinji vanoti vanoda kuita mari kubva kumba, asi vazhinji havadi kuishandira. Avo vanotenda kuti vanogona kuita mari kubva kumba vachishandisa imwe mhando yekushambadzira scam kana piramidhi vari mukumutsa kusaremekedza.
Kana wagara pane zano rebasa remba, tsvaga zvese zvaunogona uye gadzirira kuisa maawa kuti uzvigadzirise uye munzira yekubudirira. Ivo vanhu vari kuita mari chaiyo kubva kudzimba dzavo ndivo vanoda kushanda nesimba uye kuwana kubva kune vamwe uye kwavo kukanganisa.
Kune vanhu vazhinji vakaona mukana wekuita mari kubva kumba nekushandisa komputa yavo yakabatana neinternet. Iwe unogona kuzvichengetedza iwe nguva yakawanda uye mari nekutsvaga nzira yekuita mari kubva kumba zvakakwana. Kana iwe uchishuvira chaizvo kuzopedzisira wava kushanda uye kuita mari kubva kumba, bheji yako yakanaka ndeye kushandisa kugona uye kugona kwauinazvo. Vanhu vazhinji vanoti vanoda kuita mari kubva kumba, asi vazhinji havana kugadzirira kuishandira. Vanhu vari kuita mari chaiyo kubva mudzimba dzavo ndivo vakagadzirira kushanda nesimba uye kuwana kubva kune avo uye nekukanganisa kwevamwe.
Vamwe vari kuverenga:AppleunlockTmc appAppleunlockerSpymaster proVolte sip meseji sms kubata uye kuteereraMaitiro ekuona chiitiko pane yako routerNu votNyika dzaunogona kushanyiraGhostctrl apkAyiwwmqzBhjkwuyvGhostctrl kudhawunirodha